Corona dambudziko covid-19 rinoyeuchidza 2003 XNUMX Bl Blaster hutachiona hwakauraya Bill Gates: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 28 May 2020	• 13 Comments
Mamwe manzwi akawanda ari kubuda kuti coronavirus inogona kuve yakagadzirwa chaizvo muabara. Kwandakarwiswa pakutanga nevaya vanonzi vanyori vechokwadi veNu.nl, pandakanongedzera kuti hutachiona hwakadai hunogona kubva mumarabhoritari, iko zvino kwakafanana midhiya inotaura nezve mukana uyu. Skynews Chivabvu 24, musoro wenyaya: "Coronavirus inogona kunge iri 'cell tsika yekuyedza' yakanganisa."
Muzvinafundo Nikolai Petrovsky anobva kuFlinders University apedza kudzidza kwesainzi, parizvino pakuongororwa kwevezera, mukubatana neLa Trobe University kuVictoria, achiratidza kuti COVID-19 yakagadziridzwa zvakasiyana kuti iwane vanhu, zvakanyanya kupfuura chero imwe mhuka, kusanganisira mabururu. ”
Wakatotangira January 28 2020Kunyangwe vanhu vasati vaziva kuti Bill Gates aive ani, ndakataura pawebhusaiti kuti akataura zvinotevera muna 2017: "Denda rinotevera rinogona kungoitika pakombiyuta yemugandanga uyo anoda kushandisa manenjeresa kugadzira genetiki rehutachiona hwechirombo."
Kana iwe uri mutsigiri wemakomputa system mumeseji yekugara uye mahofisi pasi rese, unogona kuwedzera zvakanyanya mari yako kana iwe uchiziva mashandiro anoita macomputer iwayo. Iwe unoziva kushaya simba kwemakomputa uye kuburikidza neinternet iwe unogona kupinda mukati meiyo system yekukuvadza. Saka iwe unogona kutengesa hutachiona hwekombuta uye uwane imwe mari nekupa mhinduro. Ehezve hauite izvozvo iwe pachako, nekuti izvozvo zvingave zvakanyanya kutarisa. Unoita izvi kuburikidza nemakambani anotarisa akasununguka zvachose.
Kurwiswa kwehutachiona hwemakomputa kwegore rino kwakadzvinyirira mabhizinesi, masangano ehurumende uye vashandisi mudzimba kutenderera nyika, vachinyomba Microsoft mionero inowanikwa naBill Gates neWindows software yake.
Mazana emazana ezviuru emakomputa akange atopaza muNorth America, Asia, neEurope, uye mwero wakawedzera sezvo hutachiona hwakadzoreredzwa paInternet, nyanzvi yakati.
Uye akanyevera kuti hutachiona hune "nguva bhomba", iyo inoputika neMugovera.
MS Blaster inoshandisa software bug mumazhinji maWindows system kubva kuMicrosoft, ine Windows 2000, Windows XP, Windows NT uye Windows Server 2003 inonyanya kubata. (source: smh.com.au)
Izvi zvaive muna 2003 uye zviri nyore kufunga kuti ndiani akasvinura zvakanyanya pahutachiona uhu. John Wendell Thompson aive panguva iyoyo sachigaro weSyantantec anti virus, iyo kambani yakaburitsa 'kukurumidza kuburitsa dziviriro yekudzivirira' kurwisa iyi hutachiona hweMS Blaster musi waGunyana 11, 2003 Ndiani sachigaro weMicrosoft ikozvino? Right, iye John Wendell Thompson mumwe chete.
Chokwadi haufanirwe kuve nyanzvi yekufungidzira kuti ndiani ari kumashure kweichi 'Dambudziko, Reaction Solutionmutambo wainge waneta. Izvo zvese zvinoonekwa paunovhura maziso ako. Iyi MS Blaster hutachiona hwehutachiona yakabuda yaive yechokwadi nekugadzirwa. Masasi vakatenga anti-virus software en masse.
Mukuziva kuti muviri wemunhu uye genome rake rakanyatsogadzirwa uye kuti tiri kushandisa CRISPR-CAS tekinoroji kutevedzera chidimbu chimwe nechimwe cheDNA pane internet ikozvino muviri wemunhu, yaive imba uye hofisi komputa muna 2003. Iyo coronavirus ndiyo hutachiona hweMS Blaster panguva iyoyo uye Bill Gates achiri simba guru rekutyaira. Mari yake inoenda kuburikidza neBill & Melinda Gates Foundation kumakambani anorwisa hutachiona nenzira yekugadzira gonyo. Ndiwo mutambo mumwe chete, chete pane iyo bio-komputa level.
Chii chinotisvitsa kumubvunzo, "Sei nyore iwe uchigonesa masasi nemuvengi asingaoneki uye ivo vanogamuchira chero chiyero?" Zvakanaka, 2003 hutachiona hweBlaster Blaster kubuda kweisina kufadza makomputa. Kubuda kweCovid-19 kunoshatisa kune biocomputer yemunhu. Haisi nguva yekuvhura maziso ako here? Nzira imwechete yekubuda mukukanganisa kwenyika ino ndeye kubvarura vatambi uye kutora mari hombe dzemari mune zvematongerwo enyika nenhau. Izvo zvinotanga nekumuka uye opfuurira mune imwe kuchinja kwemoyo, uye wozotora kongiri. Tora chiito uye tanga shanduko izvozvi:
tungamira demokrasi izvozvi
Source chinyorwa listings: michat.com, smh.com.au, wikipedia.org
Netflix 'Dambudziko: maitiro ekudzivirira kubuda' kushambadzira kwekushambadzira kwehutachiona hwepasirose SuperHuman-2.0?
Bill Gates 2017: "Dambudziko rinotevera rinogona kunge rakanyatsobuda pakombuta"
Tags: kurwisa, Antivirus, bhiri, blaster, kombiyuta, coronavirus, Covid-19, Featured, Gates, John, Micorsoft, MS, MSBlaster, pc, Symantec, Thompson, mushonga, vaccination, Wendell
Washington Times yakataurawo nezvekuferefeta uku, imba ino yemakadhi iri kutanga kuparara zuva nezuva. Izvo chete kukuvara kunoitwa hakugadzirike ..
MaGates ndeeMubhedha uye anochengetedzwa kune yakakwirira nhanho nevanowanzo fungidzirwa.
Bill Gates anova anoremekedzeka knight
Izvo zvinotsanangurawo kubatana kwakazara kweEngland kuburikidza nePirbright Institute mune iyi hoax.
Zvichida ndizvozvo chete kuti kukuvara kunoitwa hakugadzirike. Kana ikagona kugadziriswa, isu tinongodzokera kune zvatanga tatova nazvo. Kana izvo zvisingaite, saka tinofanira kuvaka chimwe chinhu chitsva… ..
Zvinoshamisa kuti "dambudziko" rakakura iri ingangove mukana mukuru wekuita zvinhu nenzira dzakasiyana pasina kuve wakadzingwa.
Asi zvicharamba chiri chinhu chimwe….
Izvozvi zvavari kubatikana ...
Soros-Inotsigirwa Chikwata Inoti Covid-19 Dambudziko Inguva Yakakwana 'Yokubvisa Mhuri'
Izvo zvese zvinoenda maererano neshoko
Kambani hombe yekudzivirira WHIPLEBLOWER inoti iyo itsva RNA #COVID yekudzivirira iyo kambani yayo iri kugadzira inogona kukonzeresa STERILITY inosvika makumi mapfumbamwe muzana evakadzi, uye zvakare ichachinja iyo DNA ye97% yevanhu vanoigamuchira.
Mabhirionea Edza Kuzeya Hupasi Hwenyika, Chirevo Zvinodaro
Na Robert Robert
Chivabvu 26, 2009 11:57 am ET
Oxel akanyora kuti:
@Analyze: vhidhiyo inogona kuwanikwa kune imwe nzvimbo?
dzoka kwazviri Zed Phoenix saButtar, Mikovits, Kaufman munhu akajairwa kufungidzira uye anotsigirwa neIcke, Jones, Allen network.
Munguva yakapfuura, maCelt, maAnglo-Saxons, akatonga England chaiyo yepakutanga. Iye zvino uine mumwe 'wevamwe'
ndiani akatora nzvimbo iyoyo nemazita echirungu akagadzirwa-pamwe neanogadzira aristocracy. Iwe unoona izvi kumativi ese epasi, iyo inogara 'elite'.
Kurudyi, "zvekare chakare" chekumiririra democracy chakatiisa mune izvi mamiriro, saka inguva yeiyo yakajairika. Iyo itsva yakajairwa, nekudaro, haisi kuturikirwa zvials, asi hunhu maringe nemisimbiro yehumiriri hwakatwasuka. Naizvozvo nguva yeku http://www.fvvd.nl uye shanyira uye kusaina chikumbiro
Hongu 'isu' tinofanirwa kutenda 'edu' vanachiremba nezve 'rakanaka' basa.
Vanhu vanosaina chikumbiro, IZVOZVO.
Uye heino nhau yekuti mhirizhonga inotsamwiswa nevano fungidzirwa. Sir George Floyd mune yemasonic yakamira. Sezviri pachena aiziva mupurisa uyu, nekuti vaichengetedza pamwechete. Mafuta enhema mureza zvinoita kunge, mashoma mafirimu anozviratidza zvine musoro. Pakati pevamwe makumi matatu nemaviri mumigwagwa nezvimwe.
« Simba rekushandura rinotanga nekudeura kwekutya, kuronga uye kunyepa kwenhema uye kushanduka kuva shanduko yechokwadi
Minneapolis George Floyd Mapurisa Murder Nzira yekusafadza Hondo Yenyika? »
Kushanya kwakazara: 4.244.043
ErikvanLeeuwen op Wakarasikirwa nehondo? Kana isu tichanyatsomuka uye kutora chiito?
OVI op Wakarasikirwa nehondo? Kana isu tichanyatsomuka uye kutora chiito?
Marcos op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2